यस्तो रहेछ एनआरएनएलाई ‘मिनी राष्ट्रसंघ’ बनाउने शेष घलेको मार्गचित्र | We Nepali
२०७४ असोज १८ गते १४:५३
गैरआवासीय नेपाली संघले आगामी कार्यदिशाका रुपमा ‘भिजन २०२० एण्ड बियोण्ड’ प्रस्ताव गरेको छ । हालको संरचनालाई परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसहित आएको यो दस्तावेजका सन्दर्भमा यतिबेला एनआरएन भित्र निकै बहस भइरहेको छ । आखिर के हो यो प्रस्ताव ? किन आवश्यक भयो ? यी विषयमा हामीले यो अवधारणाका प्रस्तावक एवं संस्थाका अध्यक्ष शेष घलेसँग कुराकानी गरेका छौं ।
झण्डै डेढ वर्ष अगाडि नै यो फ्रेमवर्कमाथि छलफल गरी सुझाव दिन आईसीसी तथा एनसीसीलाई दस्तावेज पठाइएको थियो । अहिले आएर यसमाथि बहस भइरहेको छ, ढिलै भए पनि यसमा छलफल हुनु राम्रै कुरा हो ।
दोस्रो कुरा, नयाँ प्रस्तावले पावर एकीकृत गर्न खोजेको हैन कि सबैलाई अधिकार बाँडेर विकेन्द्रित गर्न खोजेको हो ।
अहिले वास्तवमा अध्यक्षमा धेरै काम थुप्रिएको छ । अध्यक्षले समय र श्रम लगाउँदा काम हुने नत्र नहुने अबस्था तपाईंहरुले देखिरहनुभएकै छ । कुनै पनि संस्था बलियो बनाउने हो भने एउटा ब्यक्ति वा पदमाथि यतिधेरै निर्भर हुनै हुँदैन ।
जसोजतो चलाउन सकिन्छ तर, यो संरचनाले अहिले नै हामीले अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकिरहेका छैनौं, परिणामुखी काम हुन निकै गाह्रो छ । यो १४ वर्षको बिचमा हामीले धेरै आन्तरिक तथा बाहृय चुनौतीहरू भोगिरहेका छौं । त्यसलाई सामना गर्न त हामीसँग प्रष्ट भिजन चाहिन्छ । सोअनुसार हाम्रा संरचनाहरु अपडेट गर्नुपर्छ । हामीले यो बिचमा धेरै किसिमका काममा सहभागिता जनाएका छौं, त्यसलाई अगाडि बढाउन हामीसँग नयाँ संरचनाहरु पनि चाहिन्छन् ।
आगामी साधारणसभामा हामी निर्णयार्थ पेश गर्नेछौं । संसारभरबाट आएका प्रतिनिधिहरुले यसका सबै प्रस्ताव र प्रावधानहरुमाथि बुँदागत रुपमा छलफल गर्न र सुझाव दिन पाउनुहुनेछ ।
बिगत चार वर्षमा मैले यो संस्थामा काम गर्दा धेरै हण्डर, ठक्कर खाएँ । कसरी काम प्रभावकारी बनाउने होला, कसरी संस्थालाई दिगो बनाउने होला, कसरी स्रोतसम्पन्न बनाउने होला भनेर मैले धेरै रात ननिदाएरै सोचेको छु । त्यही सोंचको प्रतिफल हो- यो प्रस्ताव ।
स्रोत -अनलाइन खबर डटकम